December 2012 ~ Htet Aung Kyaw
9:55 AM Htet Aung Kyaw No comments
DVB journalist launches book in Chiang Mai
Dec 11, 2008 (DVB), Former student activist and rebel soldier Htet Aung Kyaw, who now works asajournalist for the Democratic Voice of Burma, launched his book "Far from Home: 20 years in exile" in Chiang Mai yesterday.
In his book, Htet Aung Kyaw looks back over the past 20 years of the struggle for democracy in Burma, drawing on personal reminiscences and political analysis.
"Far from Home" includes many of Htet Aung Kyaw's articles for DVB, the Irrawaddy, the Bangkok Post and the Nation as well as new material on his experiences with the All Burma Students' Democratic Front.
At yesterday's launch, Htet Aung Kyaw spoke about his reasons for publishing the book.
"Now we are reaching 20 years of our democracy revolution and I was asking myself why it has taken 20 years already, and how many more it will take," he explained.
"Then I asked myself what I have done over these years and I had the idea of publishingacompilation of my articles and writing about my experience in the jungle as an ABSDF member," he said.
"I’m publishing this in the hope that it will at least give people something to think about for the struggle."
Htet Aung Kyaw said the focus of his writing had changed over the years.
"The articles I wrote about 10 years ago for various publications , questioned whyalot of people in the exile movement, especially ABSDF fighters, had started to seek asylum in third countries at that time , had they always planned to do that since they came out of Burma?" he said.
"Ten years on from then, today my attention has switched to how far we have come on our journey."
Reporting by Naw Say Phaw and Siân Thomas
BANGKOK, Dec 19 (Asia Media Forum) - On the 20th year anniversary of the 1988 uprising in Burma,aBurmese journalist in exile looks back at how that crucial event influenced his decision to tell the truth about his country.
“At the moment, it’s the only thing we can do — tell the truth — through the media,” said Htet Aung Kyaw,aNorway-based journalist and author of‘Far from Home: 20 Years in Exile‘, at the Foreign Correspondents Club of Thailand Dec 17.
Htet was an art student in Burma andalocal student leader when the Aug 8, 1988 pro-democracy uprising, focused aroundacall to an end to 26 years of military rule, exploded. Thousands of people, most of them students, were killed in the ensuing crackdown, and many more went into exile into neighbouring Thailand and other countries, making upagood number of today’s exiled community. The series of protests ended on Sep 18, 1988 when the State Law and Order Restoration Council (SLORC), as the junta as called, was established afteramilitary coup.
Fleeing to the Karen-controlled rebel area, Htet was recruited into the All Burma Student Democratic Front where he served as commander.
A journalist for the past 12 years, Htet could only shrug when asked about the future of Burma. “Everybody is asking why nothing has happened after 20 years. Frankly, I don’t know,” said Htet, adding that change does not happen overnight.
In 1989, the SLORC declared martial law to quell further protests and in 1990 held elections, the first time for the country in almost 30 years of military rule. When the National League for Democracy (NLD) party led by opposition leader Aung San Suu Kyi won byalandslide, the SLORC declared the elections void.
Since then, Burma has been under the tight grip of the Gen. Than Shwe-led government, now renamed the State Peace and Development Council (SPDC). Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi continues to be under house arrest, along with other opposition figures.
Although not much improvement is seen in the political situation, Htet have noted subtle changes happening.
“The way people think does seem to have changed. This shift in mentality could be said to be the most significant sign of progress in the past 20 years,” Htet wrote in an article he wrote for the Democratic Voice of Burma website in September this year.
In September 2007, the military cracked down on massive protests led by thousands of monks in different cities in Burma. What began asaseries of fuel price hike protests becameapro-democracy movement. The protests resulted in at least nine people being killed (independent reports say the figure was much higher), hundreds injured and reportedly thousands of arrests made.
One of the major changes, Htet said, is the advent of new media which allowed people to share information faster and toawider audience. The 2007 protests, for instance, areaprime example of this power given to the people. Through mobile phones and the Internet, particularly via blogs and through the contributions of citizen journalists, the outside world was able to witness the events in Burma.
Short-wave radio also helpedalot in the pro-democracy movement’s information campaign, especially via such programmes as Radio Free Asia Burmese and the Democratic Voice of Burma.
“The media coverage provided by those in exile is crucial given the current unrest. . . .This time, four short-wave radio stations,asatellite television channel broadcasting to Burma and the Democratic Voice of Burma TV and radio provide non-stop reports from inside Burma,” he wrote for Thailand’s English-language daily ‘The Nation‘ on Oct. 2, 2007.
“I think that the Burmese media in exile have contributedalot in terms of exposing the issues that the government want suppressed. We say this in such events as the 2007 monk-led demonstration and the May 2008 Nargis cyclone,” Htet told AMF.
While he does not see the media within Burma being free anytime soon, he believes that there are many good journalists there who share pro-democracy groups’ sentiments. “They just have no chance to voice out their ideas for obvious reasons,” he added.
But despite these changes, Htet concedes that much work needs to be done, especially in uniting the different factions among opposition parties and ethnic minorities in Burma, as well as the conflicts among the Burmese media in exile. “We need to haveasystematic strategy,astep-by-step approach to findingaresolution. We need to change the thinking of people,” he said. “We also needaunified and leading organisation to be successful.”
Unfortunately, he said there isalack of dialogue between ethnic minorities and the NLD. In the past, ethnic minorities complained that the NLD does not have their best interests in mind and would likely to continue the government’s unfair policies towards the ethnic groups, which include the Karen and Shan.
When asked about the Association of South-east Asian Nations’ (ASEAN) role inafree Burma, Htet again shook his head. “Although it is playingamore active role now than before, the ASEAN, of which Burma isamember, still has its limitations. I don’t seeaway they can change the political situation in Burma anytime soon,” he said.
After the September 2007 protests, ASEAN urged the government to stop the violent crackdown against the demonstrators, one of its strongest statements ever againstamember country.
As for the planned national elections in 2010, Htet is wary about getting his hopes too high. “I don’t seeademocratic government after the elections. It’s merelyachanging of ‘uniforms’ from military to civilian ‘clothing’ but I am afraid it will still be the same,” he said. — Lynette Lee Corporal (END/IPSAP/LLC/JS/181208)
12:12 AM Htet Aung Kyaw No comments
1:17 AM Htet Aung Kyaw No comments
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်မည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသူ (သို့မဟုတ်) တစ်နှစ်အောက် အတွေ့အကြုံရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
သတင်းထောက်ဖြစ်လိုပါသလား။ တစ်လတိတိ သင်တန်း တက်ရောက်နိုင်ပါသလား။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အခမဲ့သင်ကြားမည့် တစ်လကြာသင်တန်းတွင် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း နားလည်စေရန်နှင့် သတင်းထောက်တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေခံပညာများ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
နယ်မှလာရောက်သူများအတွက် လမ်းစရိတ်၊ အစားအသောက်နှင့် နေထိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သည့် သတင်းစာပညာသင်ကြားမှုတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော သတင်းစာပညာသင်တန်းဆရာများက အနီးကပ် ကြီးကျပ်သင်ကြားပေးမည်။
မိမိကိုယ်တိုင် သတင်းလိုက် သတင်းရေး အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းများ လက်တွေ့လုပ်ရမည်။ အလုပ်ရှာနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အဆက်အသွယ်၊ ကွန်ယက်နှင့် အခြားလိုအပ်သည်များအတွက် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်။
သင်တန်းတက်ရန်အတွက် အောက်ပါ လျှောက်လွှာဖောင်ကို မိမိကိုယ်တိုင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပဏာမ အရွေးခံရပါက လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ဆက်လက်ဖြေဆိုရမည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ လျှောက်သူများကို အထူးလိုလားပါသည်။
ဖောင်ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှာ info@jschoolnewslab.com ဖြစ်ပါသည်။
12:11 PM Htet Aung Kyaw No comments
ထားဝယ်= ပျု... ဆရာဇော် (စိတ်ပညာ)
(by Phoe Zaw on Monday, December 24, 2012 at 1:56pm · ကိုဖိုးဇော် Facebook မှာတင်ထားတာကို စိတ်ဝင်စားလို့ ထပ်မံဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ အဆို(၂)ခုရှိပါတယ်။ ပထမအဆိုက ထားဝယ်သည် ပျူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါ တယ်။ ဒီအဆိုကို ထားဝယ်သားပညာရှင်တွေကော၊ ထားဝယ်သားတွေကော အားလုံးယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါ တယ်။ ဒုတိယအဆိုကတော့ ထားဝယ်သည်ပျူမဟုတ်၊ ပျူနှင့်အတန်းတည်းတူတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုပါ တယ်။ ဥပမာတစ်မိတည်းကမွေးတဲ့ညီအစ်ကို(၇)ယောက်မှာ ပျူကတစ်ယောက်၊ ထားဝယ်ကတစ်ယောက်ဖြစ် တယ် လို့ဆိုလိုတာပါ။
ထားဝယ်ကို အထင်သေးတဲ့သူတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ထားဝယ်သားတွေဂုဏ်ယူဖို့ရယ်၊ နောက်လေ့လာလိုသူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးပါတယ်။ သမိုင်းကိုရေးတဲ့အခါ သတိထားရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းက သမိုင်းကို သိတယ်လို့ထင်ကြလို့ပါ။ ပညာရှင်ဆိုတဲ့ သူတွေတောင် အားလုံးကို မပြောနိုင်ပါဘူး။ အတိတ်ကို ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်လို့ပါ။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ သမိုင်းရေးသားပုံကို ပြောလိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သမိုင်းစာအုပ်တွေများစွာရှိ တယ်။ ဘုရားသမိုင်းကစပြီးနိုင်ငံသမိုင်းအထိပါ။ ဒီစာအုပ်တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ သမိုင်းရေးနည်း(၂)မျိုး တွေ့ရတယ်။ ပထမရေးနည်းက ပြည်သူတွေထဲက ရေးသားတာတွေ့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မူစဉ်ကနဲ့စပါ တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပီပီ ဘုရားကို ဦးထိပ်ထားပါတယ်။
ဒုတိယရေးနည်းက အနောက်နိုင်ငံတွေကရေးသားနည်းပါ။ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ပညာရှင်ဆိုတဲ့သူတွေ ရေးတဲ့နည်းပါ။ သမိုင်းကို ကျောက်ခေတ်၊ကြေးခေတ်၊သံခေတ်၊ယဉ်ကျေးမှုခေတ်၊ ပျူခေတ်၊ ပုဂံခေတ်စသည် ဖြင့်ရေးသားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့သူတွေက ဒီနည်းကို အထင်ကြီးကြပါတယ်။ ဘာလိုရေးရေး၊ သမိုင်းတန်ဖိုးပါ ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူ့အတွက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဆို ( ထားဝယ် = ပျူ )ကို သမိုင်းအထောက်အထားများကို ကိုးကားပြီး အနောက်နိုင်ငံက ရေးသားကြတဲ့အတိုင်း ဖော်ပြပါမယ်။ ပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူကဆုံးဖြတ်ကြပါ။ အမှန်ဘဲဖြစ် ဖြစ်၊ အမှားဘဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပေးကြပါ။ အားလုံးပါမှ ပိုကောင်းမှာပါ။
ပျူခေတ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၂၀၀)ကနေ (၁၉၀၀)ထိ ၊ခရစ်မပေါ်မီ (၂)ရာစုမှ ခရစ်ပေါ်ပြီး (၉)ရာစုအထိလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပျူခေတ်မှာထင်ရှားတာက ဗိဿနိုး၊ဟန်လင်း၊သရေခေတ္တ၊ အခုနောက်ပိုင်း မိုင်းမော၊၀တီး၊တကောင်းစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှတ်တမ်းတွေအရ ခံတပ်မြို့(၉)မြို့၊ ထင်ရှားကျော် ကြားတဲ့ ဒေသ(၃၂)ခု၊ လူမျိုးစုပေါင်း(၂၉၈)မျိုး၊ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ ( လက်အောက်ခံလို့လည်း ဆိုပါတယ်) နေရာ(၁၈)နေရာ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ အကြောင်းတွေဖြစ် ပါတယ်။
ပထမအထောက်အထားအနေနဲ့ပြောလိုတာက ထားဝယ်ဒေသမှာ ပျူခေတ် ( လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၂၂၀၀)မတိုင် ခင်ကတည်းကလူရှိနေပါပြီ။
မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေက မိုးကြိုးသွားလို့သိကြပါတယ်။ ရိုးရာဆေးဆရာတွေက ဆေးကုရာမှာ သုံးနေတုန်းပါ။
ဒီကာလကို ပညာရှင်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၄၀၀၀)ခန့်ကလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မမူခင်နှစ် ပေါင်း(၁၅၀၀)ခန့်ကပါ။ ဒီထက်စောစောကတည်းကလူနေနိုင်ပါတယ်။ သက်သေမရှိသေးလို့ မပြောလိုသေး ပါဘူး။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အရ ဒီထက်စောစောကတည်းက လူနေပါပြီ။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ပျူခေတ်ဆုံးတော့ ပုဂံခေတ်ပေါ်လာပါတယ်။ အနောက်တိုင်းနည်းအရ ပုဂံခေတ်ကို အနော်ရထာ( အေဒီ၁၀၄၄-၁၀၇၇)က စပါတယ်။ ထားဝယ်မှာ ပုဂံခေတ်အထောက်အထားတွေများပါတယ်။ (၁) အနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့အုတ်ခွက်ဘုရားကို ရှင်မော်မှာတွေ့တယ်၊(၂) ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့ ထားဝယ်မြို့စား တွေရဲ့ အုတ်ခွက်ဘုရားတွေ မုတ္တီးမှာတွေ့ရပါတယ်။ စာအရေးအသားနဲ့ပါ။ (၃) စည်သူ(၂)ရဲ့ ဓမ္မရာဇိက ကျောက်စာ(ခရစ်၁၁၉၆)မှာ ထားဝယ်ကို ပိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ပုဂံခေတ်(အနော်ရထာလက်ထက်)မှ ထားဝယ်က တည်ထောင်တာမဟုတ်ဘူး၊ မြို့ပြတည်ထောင်ဖို့အနည်းဆုံးနှစ်(၂၀၀)လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပျုခေတ်ရဲ့အရှေ့ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ခေတ်သစ်ကာလ၊ ပျူခေတ်ရဲ့အနောက်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံခေတ်ကာလတွေ မှာ ထားဝယ်မှာ လူရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်ပြီး ပျူခေတ်ကာလအထောက်အထားတွေ ပြောပါမယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ ပျူယဉ်ကျေးမှုလက္ခဏာ(၁၁)ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေအတိုင်း ထားဝယ်မှာ (၁)တစ်တောင်အုတ်လိ်ု့ခေါ်တဲ့အုတ်ချပ်ကြီးတွေ၊လက်ရေးစင်းပါအုတ်တွေ၊စာပါတဲ့အုတ်တွေတွေ့ ရပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် သာဂရမြို့ဟောင်းမှာပါ။
(၃) သီရိဝစ္ဆနဲ့ဘဒ္ဒပီဌတံဆိပ်ပါတဲ့ဒင်္ဂါး၊ (၄)ပျူခေတ်လက်ရာအုတ်ခွက်ဘုရား၊
(၆) ခရစ်နှစ်(ရ၅၁)ခုနှစ် (ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၃ခုနှစ်)မှာတည်ပြီးအ၀ိုင်းပုံရှိတဲ့ သာဂရမြို့ဟောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
စာပေအထောက်အထားတွေကတော့ မြန်မာ့သမိုင်းတွေမှာ ပျူ(၁၂)ပြည်ထောင်ရှိပြီး တနင်္သာရီပျူ(မြို့တော် ထားဝယ်)လို့ဆိုပါတယ်။ မှန်နန်းရာဇ၀င်တော်ကြီးမှာ ပျူတွေ(၃)စုကွဲကြတယ်၊ ရခိုင်ဓည၀တီ၊တနင်္သာရီ၊ ထားဝယ်ကို ရောက်ကြောင်းဆိုတယ်၊ ဇဗ္မူကွန်ခြာကျမ်းမှာလည်း ဒီအတိုင်းဆိုပါတယ်။ရခိုင်ရာဇ၀င်တွေက ဓည၀တီခေတ်ကို ခရစ်မီ ၃၃၂၅နှစ် မှ ခရစ်ပေါ်ပြီး၃၂၆နှစ်ထိ လို့ဆိုပါတယ်။
လောကဟိတရာသီကျမ်းမှာ လူမျိုး(၁၀၁)ပါးစာရင်းရှိပါတယ်။ မြန်မာ(၇)မျိုးရှိပြီး မြန်မာ၊ပျူ၊ကမ်းယံ၊ယော၊ရခိုင်၊ တောင်သူ၊ထားဝယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်၊ မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတမ်း(အတွဲ-၂)မှာ မူကွဲ(၅)မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ မူကွဲ(၅)မျိုးမှာလည်း ပျူနဲ့ထားဝယ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၉၆၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားလမ်းညွှန် စာအုပ်ပါ လူမျိုး(၆၉)မျိုးစာရင်းတွင် ဗမာထားဝယ်လိ်ု့ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းတွေအနေနဲ့လည်းရှိပါတယ်။ တရုတ်မှတ်တမ်းတွေမှာ ဖှူးကန်တူးးလု(ပုဂါမဒွါရ)၊တွန်ယွှန်၊ချီ- ယယ်န်ထော်ဝမ်၊နို့ထော်ဝမ်၊ထော်ဝမ်လို့ဆိုပါတယ်၊ ဆရာကြီးဦးရည်စိန်က ထော်ဝမ်ဆိုတာ ထားဝယ်နဲ့နီးစပ် တယ်။ ထားဝယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒီယမှတ်တမ်းတွေ သုဝဏ္ဏဘူမိ(ရွှေမြေ)ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ(၃၀)ရက်၊ဒီဇင်ဘာ(၁)နှင့်(၂)ရက်တွေမှာ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းက စပွန်ဇာပေးပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းမှာ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံ တော်စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ကျင်းပပါတယ်။ ဒီစာတမ်း ဖတ်ပွဲမှာ ကျွန်တော်က အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေကို အကျယ်ရေးသားပြီး ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့ ထားဝယ်သည် ပျူဖြစ်သည် (သို့) ထားဝယ်သည် ပျူနှင့်ညီအစ်ကို တော်သည်ဟူသော အကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ဆက်လက်သုတေသန လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ အသက်ရှိနေသမျှ ဆက်လက် လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်း ၀ိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းစေလိုပါတယ်။ ဝေဖန်ပေးကြပါ။ ကူညီကြပါလို့။ ။
1:52 AM Htet Aung Kyaw No comments
(အခုအချိန်ဟာ ဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ခရစ်မစမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်တွေရှိ လို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေခရီးသွားနေကြသလို ပြည်တွင်းမှာလဲ ရာသီဥတုပွင့်လင်းချိန်မို့ သူငယ်ချင်း တချို့ခရီးသွားနေကြပါတယ်။ လောလောဆယ် ခရီးမသွားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်ကတော့ အယင်နှစ်တွေက ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ခရီးစဉ် မှတ်တန်းတချို့ကို ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်)
ဒါကတော့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ တုန်းကသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ် စုစည်းတင်ပြချက်ပါ။ (ဗဟုသုတ ခရီးစဉ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်)
ဒါကတော့ ၂၀၁၁ ခရီးစဉ်တုန်းက ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။ ( ဗဟုသုတခရီးထက် ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းက ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားမိတဲ့ခရီးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်)
ဒါကလဲ ၂၀၁၁ ပါဘဲ့။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ အရေးပါလှတဲ့ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးဘေးနားက ထူးထူးခြားခြား နယ်ခြားဖြတ်ကျော်နေသူများဖြစ်ပါတယ်။ (ဗဟုသုတနဲ့ နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးဒုက္ခအပြင် စီးပွါးရေး ဒုက္ခကိုပါ မြင်နိုင်တဲ့ခရီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်)
ဒါကတော့ ပြန်ဖွင့်ဖို့ကျိုးစားနေတယ်လို့ကြားရတဲ့ ထိုင်း-မြန်မာ သေမင်းတမန် ရထားလမ်းအမှတ်တရပါ။
9:11 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဓာတ်ပုံ Moe KYaw Facebook မှ
မြန်မာအစိုးရကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် ဥက္ကဌ ရဲဘော် သံခဲ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး ပြည်တွင်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ ဒီကနေ့ မနက် (၈)နာရီခွဲက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့ကနေ ရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။